ပျံသန်းနေဆဲ ခွပ်ဒေါင်းများသို့ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
November 26, 2007, 2:27 am Filed under: Songs သိပ်အားမာန်ပါတဲ့သီချင်း ၊ နှလုံးသားကို ရိုက်ခတ်နိုင်တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ ။ အားလုံးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ရေးသား တီးခတ် သီဆိုသူ မျိုးချစ်မြန်မာ
Intro: Am E G Am A7 Dm F E
Am E G Amသံဃာ ရှိခိုးကိုးကွယ်ခဲ့တို့တွေ ဒါဟာ တို့ဘုရားရှင်ရဲ့ သားမြတ်တွေA7 Dm F E7သယ်ပိုးပေးဝေဆဲ ဗုဒ္ဓအမွေ ခုများတော့ ပျက်သုန်းတော့မယ်ဟေ့….Am E G Amအာဏာယစ်မူးတဲ့ စောက်ရူးသန်းရွှေ ဘာသာပျက်စီးရာကိုရှေုးရှုနေA7 Dm F E7ငါတို့အတွက် အသက်စွန့်ထား ဘုန်းကြီးတွေ မိုက်ရိုင်းစွာရိုက်သတ်တယ်လေ….
A7 Dm G7 Cဒို့ခေါင်းများလဲ သွေးစိုရွှဲပစေ ဘယ်တော့မှတော့ဦးမညွတ်ဘူးဟေ့Dm Am Eဒါဏ်ရာကိုအံတုရင်း ခြေကန်ကာမာန်ဟုန်သွင်း ရဲရဲတောက် ဒို့ဝိဥာဉ်တွေ…CHO: A7 Dm G7 Cမျိုးဆက်သစ် ဒို့ရဲ့သွေးတွေ တွဲလက်တို့ ဆက်နေဆဲဟေ့Dm AmE Amအာဏာကိုဖီဆန်ရင်း လေဆန်မှာအတောင်ဖြန့်ရင်း ခွပ်ဒေါင်းများကရှေ့ဆက်ပျံနေ….
Am E G Amဒီအလိမ်အညာများလဲ ကမ္ဘာကသိနေ ဘလေ့ာဂါ ရဲဘော်တွေ ထိုးနှက်နေA7 Dm F E7ဘယ်တုန်းကမှအရှက်မရှိသော စောက်ခွက်တွေ ကမ္ဘာကြီးကိုဆက်တိုက်လိမ်နေ….Am E G Amအမှန်ကိုပြောဖို့ဆို ကြောက်ရွံ့နေ လူအရှင်ကြီးကိုတောင်မီးရှို့ပေA7 Dm F E7ဒီရက်စက်တဲ့ မိစ္ဆာဆိုးဒိဠိတွေ ဘ၀တိုင်း ပြန်သတ်ရပါစေ….
CHO: Solo: ( Am E G Am A7 Dm F E ) အစအဆုံး တစ်ခေါက်ပြန်ဆို
Sis Linlet! Great song writter and Great Singer, Ko Myo Chit! We can feel it, the strong encourage emotion from sharing, singing, and writting by Ko Myo Chit for Saffron Revolution!
November 26, 2007 @ 11:18 am Reply	very special, professional level. goosebumps
Comment by Ottara
November 27, 2007 @ 10:04 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI